Rita, Writing for My Sake!: လူ နားမလည်အောင် ရေးတဲ့ စာ
Posted by Rita at 6/15/2010 12:42:00 AM
It seems to me that three Different Presentations intend to same destination.
တခေါက် နှခေါက် သုံးခေါက် ဖတ်ပြီးတော့ ပြန်သွားတယ်
ကိုယ်တော့ နောက်ဆုံးစာပိုဒ် ဘယ်သူရေးသွားတာလဲလို့ သိချင်မိတယ်။
အစ်မစာတွေကို တခေါက်ဖတ်ရုံနဲ့ ဘယ်တော့မှမပြီးဘူး
စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းရေးပြတာ honesty ရှိလို့ပေါ့ =)
နားလည်ရင် လူမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမယ်။ လူနားမလည်အောင်ရေးထားတာဆိုတော့..။
လူမဟုတ်ရင် နတ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ =)
ဒါဆို hypocrite ပေါ့ =P
၃၁လို့ရေးထားတဲ့ဂဏန်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး သစ်တုံးလို့ တစ်ခါတစ်ခါတော့ ဘာသာပြန်ကြည့်ချင်ပါရဲ့။
ပို့စ် တွေအပြင်..Comments တွေပါ ဖတ်ဖြစ် တာ Rita ဘလော့ခ် လည်းအပါအ၀င် ပဲ..။